Tonight, At the Movies (2018) - Myanmar Asian TV
MMATV ကနေပြီးတော့ ဂျပန် အချစ်ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ…..
အချစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ ဘယ်လို ရုပ်ရှင်မှာ ဖော်ပြမလဲဆိုတာ ခဏတာ အတွေးလေးပေါ့….
တစ်ချိန်တစ်ခါက ရုပ်ရှင်ကို အရမ်းကို ရူးသွပ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်
ပိတ်ကားပေါ်က မင်းသမီးလေးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်….
သာမန် ဆုံတွေ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့….
ပိတ်ကားထဲကအတိုင်း အဖြူအမည်း မင်းသမီးက အပြင်လောကကို
ကဲ သဘာဝလွန်နဲ့ စတဲ့အချစ်လေးပေါ့….
ဘယ်လို အကွေ့အပတ်တွေနဲ့ အချစ်ကို ခရီးဆက်ကြမယ်ဆိုတာ… မပြောတော့ပါဘူး….
ဇာတ်လမ်းလေးက အချစ် Drama ဇာတ်လမ်းလေးဆိုတော့
ပုလဲလးတွေ မြေမခစေဖို့ တစ်ရှုးလေးတော့ ဆောင်ထားရင်းကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်…
IMDB မှာ 7.3 နဲ့ Mydramalist မှာ 8.2 ထိတောင် Rating ရှိတယ်ဆိုတော့….
File Size : 877.4 MB
Actors: Akiyoshi Nakao, Haruka Ayase, Kazuki Kitamura, Kentaro Sakaguchi, Tsubasa Honda
Soliddrive.co Myanmar 877.98 MB Download Openload.co Myanmar 877.4 MB Download